အာနာ ဖရန့်၏ အိမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၅ တွင် တူးမြောင်းအိမ်နှင့် ပြတိုက်အဝင်ဝကို တွေ့ရစဉ်
၃ မေ ၁၉၆၀ (၁၉၆၀-၀၅-၀၃)
52°22′31″N 4°53′02″E﻿ / ﻿52.3753°N 4.884°E﻿ / 52.3753; 4.884ကိုဩဒိနိတ်: 52°22′31″N 4°53′02″E﻿ / ﻿52.3753°N 4.884°E﻿ / 52.3753; 4.884
၁.၃ သန်း (၂၀၁၆)
အာနာ ဖရန့်၏ အိမ် (ဒတ်ချ်: Anne Frank Huis; အင်္ဂလိပ်: The Anne Frank House) သည် ဂျူးသွေးပါသော စစ်အတွင်း နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးသူ အာနာ ဖရန့်၏ အိမ်တစ်လုံးဖြစ်သည့်အပြင် သူမကို ရည်ရွယ်ဂုဏ်ပြုထားသော အတ္ထုပ္ပတ္တိ ပြတိုက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဤအဆောက်အဦသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ အမ်စတာဒမ်မြို့လယ်ရှိ ဝက်စတာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်အနီး ပရင်ဆန်ဂရာ့ချ်တ် (Prinsengracht) ဟုခါ်သော တူးမြောင်းဘေးတွင် တည်ရှိ၏ ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း အာနာ ဖရန့်သည် နာဇီဂျာမန်များ၏ ဂျူးများအပေါ် နှိပ်ကွပ်ညှင်းဆဲမှုများ အန္တရာယ်မှ မိသားစုဝင်များ၊ အခြားသူလေးဦးနှင့်အတူပုန်းအောင်းခဲ့ရသည်။ ၁၇ ရာစု တူးမြောင်းအိမ်၏ နောက်ကျောဖက်ရှိ အခန်းများတွင်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အအုံကို the Secret Annex (ဒတ်ချ်: Achterhuis) ဟုလည်း အများအာဖြင့် သိရှိကြပေသည်။ အာနာသည် အသက်မရှင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း သူမရေးသားခဲ့သော စာများကို အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း (The Diary ofaYoung Girl) အဖြစ် ၁၉၄၇ တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ကာ ဆယ်နှစ်မျှကြာသော် အဆောက်အအုံကို ဖြိုဖျက်ချင်သော အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ဤအဆောက်အအုံကို ကာကွယ်ရန် အာနာဖရန့် ဖောင်ဒေးရှင်း ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၆၀ မေ ၃ တွင် ပြတိုက်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့၏ ။ ပြတိုက်ထဲတွင် လျှို့ဝှက်ပုန်းခဲ့သော အခန်းကို ထိန်းသိမ်းထားရှိ ပြသထားပြီး အာနာ ဖရန့်၏ ဘဝအကြောင်းအရာများကိုလည်း ပြသထားသည့်အပြင် (ဂျူးများ)ကို နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခဲ့သည့် ပုံစံမျိုးစုံကိုလည်း ပြသထားသည့် အခန်းပါရှိလေသည်။ ၂၀၁၃ နှင့် ၂၀၁၄ တို့၌ ပြတိုက်ကို လာရောက်လေ့လာသူ ၁.၂ သန်းခန့်ရှိကာ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် တတိယမြောက် လာရောက်မှုအများဆုံး ပြတိုက်လည်းဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Opening hours, prices, location, Anne Frank House. Retrieved 11 July 2014.
↑ Piersma၊ Jasper။ "Van Gogh Museum zit Rijks op de hielen als populairste museum" (in Dutch)၊ December 29, 2016။ 13 March 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Saved from demolition, Anne Frank House. Retrieved 11 July 2014.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Management Archived 23 September 2015 at the Wayback Machine., Anne Frank House. Retrieved 11 July 2014.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာနာ_ဖရန့်၏_အိမ်&oldid=674181" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၁:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။